RASMI: Xiddig ka tirsan Manchester City oo ku biiray Koox ka dhisan dalka Jarmalka – Gool FM
(Manchester) 31 Jan 2020. Waxaa goordhow la shaaciyey in xiddig ka tirsan kooxda kubadda cagta Manchester City uu ku biiray naadi ka dhisan dalka Jarmalka.
Daafaca bidix ee Kooxda Manchester City ee Angelino ayaa heshiis amaah ah ilaa dhammaadka xilli ciyaareedka ugu biiray Naadiga RB Leipzig ee dalka Jarmalka.
Kooxda Red Bull Leipzig ayaa daafaca Manchester City ee Angelino waxa ay ku qaateen heshiis amaah ah ilaa inta ka dhiman xilli ciyaareedka, waxaana ay ku kala baxeen heshiiskan daqiiqadihii ugu dambeeyey suuqa kala iibsiga Janaayo.
Angelino ayaa kaliya dib ugu soo biiray Sky Blue xagaagii hore, laakiin kooxda reer Jarmal ayaa la soo wareegtay daafaca dambeedka bidix daqiiqadii ugu dambeeyay, iyadoo suuqa kala iibsiga uu xirmayo, waxaana ay dooq u haystaan inay xagaaga kula wareegaan adduun dhan 25 milyan oo gini.
Angelino ayaa Man City kaga soo biiray kooxda PSV Eindhoven xagaagii la soo dhaafay, isagoo hadda aan ka mid ahayn qorshaha tababare Pep Guardiola ee Kooxda Man City.
Daafacan garabka bidix ayaa ku bilaawday kulamo dhowr ah bilaha November iyo December, laakiin kama uusan soo muuqan horyaalka Premier League tan iyo guuldarradii 2-1 ee ka soo gaartay Manchester United 07 bishii December.
Xiddiga reer Spain ayaa xulkiisa qaranka ee xiddigaha da’doodu ka hooseyso 21-jirrada u saftay labo kulan, laakiin ilaa iyo hadda waa uu ku guuldarreystay inuu ku biiro xulka waa weyn.